Muwaadin Soomaaliyeed oo kamid noqday Baarlamaanka Midowga Yurub – Kalfadhi
Muwaadin Soomaaliyeed oo kamid noqday Baarlamaanka Midowga Yurub
May 27, 2019 Kalfadhi
Maajid Maajid oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo heesta dhalashada dalka Ingiriiska ayaa ku guuleestay kamid noqoshada Xubnaha Baarlamaanka Midowga Yurub sida uu ku daabacay bogga uu ku leeyahay Twitter-ka.
Maajid Maajid ayaa isaga iyo qoyskiisa waxay Ingiriiska galeen isagoo shan sano jir ah kadib markii ay ka carareen magaalada Burco ee Waqooyiga Soomaaliya xilli ay socdeen dagaaladii Sokeeye ee Soomaaliya.
Mudadii uu ku noolaa Ingiriiska waxa uu hormaro badan ka sameeyay Nolashiisa isagoo noqday duqa magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska. Maajid Maajid ayaa horay taariikh uga sameeyay dalka Britain,kadib markii uu diiday in Madaxweynaha Mareykanka uu soo booqdo Magalada uu Duqa ka ahaa ee Sheffield ee dalka Britain,waxaana xilligaas uu ahaa Duqa Magaalo ee ugu da’da yar dalka Britain.
Maajid Maajid ayaa sheegay in ay doorteen dad isugu jira Soomaali iyo Ajaaniib kuwaas oo ku qancay shaqadii uu ka qabtay magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska isagoo u mahadceliyay dhamaan intii codka siisay.
Maajid Maajid ayaa hormuud u noqday dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku nool wadamada dibadda gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka. Waxaa jira dad kale oo Soomaaliyeed oo dadaal ugu jira kamid noqoshada Baarlamaanka Yurub.
Cabdullaahi Xasan Dhaqaale oo katirsan Soomaalida ku nool dalka Sweden ayaa sidoo kale kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee tartanka kamid noqoshada Baarlamaanka Yurub dedaalka ugu jira. Cabdullaahi wali laguma dhawaaqin natiijada tartankii uu galay.